Gel maka ike na amụba amụba - 50%
Home » Gel maka ike na amụba amụba
Gel maka ike na amụba amụba
Taa, enwere ọtụtụ ihe ngwọta nye nsogbu nwoke na nwanyị na-enwekarị, dị ka enweghị ike ịme mkpịsị amụ, enweghị agụụ mmekọahụ, etolite etolite, ma ọ bụ obere amụ. Ọtụtụ afọ nyocha na nyocha emeghewo ụzọ maka ọgwụ ndị ọrụ ebube, ọgwụ mgbakwunye, ọgwụ, mmega ahụ na amụ amụ na-ekwe nkwa mmezi nwoke n’akụkụ dị iche iche.
Ihe ọhụụ kachasị ọhụrụ taa bụ iji gel na-emeziwanye nwoke nke ị nwere ike itinye ozugbo na akpụkpọ ahụ. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-ahọrọ usoro a n’ihi na ọ dị irè ma dịkwa mfe ịrụ. Kwesighi iji mbadamba nkume wee ilo ya na mmiri kwa ụbọchị.
Gịnị mere eji ele gel anya karịa ka ọ dị irè?
The nwoke nkwalite jel bụ transdermal, nke pụtara na ọ na-abanye site na gị dermis ma ọ bụ akpụkpọ. A na-etinye gel na-arụ ọrụ na mpempe akwụkwọ na usoro dị ike ya na-etinye uche na ya ozugbo. A na-etinye ihe ndị dị na gel nwoke na-emeziwanye ihe kpọmkwem na mpaghara ahụ ezubere, na-eme ka ọ dị irè karị ma e jiri ya tụnyere mbadamba na ihe mgbakwunye ọnụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, ihe mgbakwunye ọnụ nwere ihe ndị na-abanye n’ọbara ma kesasịa ahụ niile, ọ bụ naanị ole na ole n’ime ihe ndị a na-eru ebe amụ.
Site na iji gel dị n’elu, ị ga-enweta nsonaazụ dị mma na ngwa ngwa. Mmezi nwoke Gel na-arụ ọrụ site na ịnye gị nrụpụta siri ike ma dị ike na obere sekọnd, na-emeziwanye mmekọrịta nwoke na nwanyị na agụụ na-aga n’ihu, yana agụụ mmekọahụ zuru oke oge ọ bụla. Gị na onye òtù ọlụlụ gị ga na-arụ ọrụ abalị niile wee rue ụtụtụ.
Akụrụngwa ile anya
Mgbe ị na-ahọrọ gel nke nkwalite nwoke, jide n’aka na ị gụrụ ihe ndị ahụ ma chọpụta ihe ndị mejupụtara kachasị ike iji nweta afọ ojuju mmekọahụ. Ekwesịrị ịchọta ọnụnọ nke vasodilators na androgen precursors, na mgbakwunye na ngwakọta nke ahịhịa dị ike.
Androgen precursors na-enyere ahụ nwoke aka ịmịkwuo testosterone. Mgbe nke a mere na mmụba nke testosterone, ị nwere ike nweta mmụba na agụụ mmekọahụ na arụmọrụ mmekọahụ ka mma, yana ọbụlagodi akụkụ ahụ buru ibu.
Ekwesịrị ịchọta ọdịdị ọzọ nke vasodilators. Ihe ndị a bụ ihe na – enyere aka mee ka ọbara gbasaa ma dọọ okpu na akwara nke na – eduga na amụ. Ebe ọ bụ na akwara veins na-ebuwanye ibu, ọbara ọzọ nwere ike ịbanye n’ime amụ ma nọrọ ebe ahụ ogologo oge, na-ebute nrụpụta zuru ezu ma dị arọ nke na-adịte aka.
Gel kacha mma n’ahịa
Enwere ọtụtụ gels nkwalite ụmụ nwoke dị taa, ọ nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya ịhọrọ ya. Goodzọ dị mma iji chọpụta bụ ịgụ ihe ndị a wee gaa n’ịntanetị iji gụọ nyocha nke ndị ọrụ nyefere. Ebe ọ bụ na nyocha ndị a sitere n’aka ndị ọrụ na-ejikwa ngwaahịa ahụ, ị ​​nwere ike nweta nnukwu isi iyi nke ozi a na-achọghị iche. Nyocha ndị dị n’ịntanetị bụ ụzọ dị mma iji chọpụta ngwaahịa ndị kachasị mma ma dị irè n’ahịa.
Iji jide n’aka na ị na-eji gel nkwalite nwoke nke dị irè, dị mma na nke okike, gaa naanị ngwaahịa ndị nwere ọkwa dị mma n’ịntanetị.
PhenGold capsules Arab
SHARK MOTION KAPSULE